Ganacsiga ayaa abaalmarin $ 388,000 si ay gacan uga geysato u beddelka Xarunta Toosinta Larch laga bilaabo saliidda loona beddelo tamarta qoryaha la cusboonaysiin karo - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsigu wuxuu abaalmarin $ 388,000 si uu uga caawiyo ka beddelka Xarunta Saxitaanka Larch laga bilaabo saliidda loona beddelo tamarta qoryaha la cusboonaysiin karo
Barnaamijka deeqda sanduuqa tamarta nadiifka ah wuxuu taageeraa u beddelka saliida duugga ah iyo foornooyinka borotiinka iyo kuleyliyaha ku jira xarumaha dadweynaha looguna beddelo qoryaha biomass alwaaxda dib loo cusboonaysiin karo.
OLYMPIA, WA - The Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta ku dhawaaqay abaalmarin $ 388,000 ah oo la siinayo Waaxda Asluubta ee Gobolka Washington iyada oo loo marayo barnaamijka Wood Energy ee loogu talagalay Adeegyada Xarumaha Dadweynaha, qaybna ka ah gobolka Washington Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah (CEF). Waa mashruucii ugu horreeyay ee CEF loogu talagalay in lagu beddelo xarun dawladeed oo loo beddelo shidaalka biomass alwaaxda dib loo cusboonaysiin karo. Maalgalinta waxaa loo isticmaali doonaa in lagu rakibo nidaam tamar casri ah oo wax ku ool ah oo laga hirgeliyo Xarunta Dhaqan celinta ee Larch oo u dhaw Yacolt ee bariga Clark County si loogu dheellitiro isticmaalka saliida shidaalka ee kuleylka iyo biyaha kulul.
Qashinka goosashada kaymaha ee udhow dhirta federaalka, gobolka iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa shidaali doona kululeeyaha, taas oo u abuureysa qiime biomass heerkeedu hooseeyo oo lagu soo saaray howlaha maaraynta keymaha. Mashruucan wuxuu sidoo kale kordhin doonaa adkeysiga tamarta ee xarunta, wuxuuna u noqon doonaa tusaale tusaale mashaariicda mustaqbalka ee gobolka iyadoo la muujinayo faa'iidooyinka bulshada, deegaanka iyo dhaqaalaha ee tamarta qoryaha.
"Mashruucani waa kii ugu horreeyay noociisa ee ka dhex dhaca xarumaha gobolka ee Washington," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. “Taageerida adeegsiga ilaha alwaaxda la cusbooneysiin karo waxay yareyneysaa qiiqa hawada lagu sii daayo iyadoo la taageerayo shaqooyinka xoojinaya alwaaxyada miyiga ku nool.
"Annaga halkan jooga waaxda asluubta waxaan aad ugu mahadnaqeynaa Lisa Brown iyo waaxda ganacsiga maalgalintan," ayey tiri xoghayaha Asluubta Cheryl Strange. "Mashruucani wuxuu nagu soo dhaweynayaa Washington oo ka shaqeysa tamar nadiif ah iyo mustaqbal ka xor ah waxyaabaha wax u dhimaya deegaankeena."
Abaalmarintan deeqda ah ee tartanka waxaa lagu xirey fulinta heshiiska ugu dambeeya ee mashruuca iyo qandaraaska ku saleysan waxqabadka ganacsiga. Deeqaha lagu bixiyo barnaamijka tamarta qoryaha waxaa loo qoondeeyay hay'adaha dowliga ah ee qaadaya mashaariicda u beddelaya foornooyinka iyo kuleyliyaha lagu shubay shidaalka ama borotiinka ee loo yaqaan 'wood biomass oil'. Ujeeddooyinka barnaamijka ballaaran waxaa ka mid ah kor u qaadista waxqabadka nidaamka deegaanka, iyo taageeridda adkeysiga tamarta iyo shaqooyinka keymaha ee miyiga, bulshooyinka ku tiirsan alwaaxda.
Dhismayaashu waxay matalaan ku dhowaad shan-meelood meel ka mid ah wasakhda gaaska aqalka-wasakhaysan ee Washington oo leh qaybta ugu badan ee ka timaadda gaaska dabiiciga ah iyo shidaalka kale ee ku-meel-gaadhka ah ee kululaynta booska, kululaynta biyaha iyo karinta. Washington's 2021 Istaraatijiyadda Tamarta ee Gobolka waxay tilmaamaysaa waxtarka tamarta ee dhismayaasha inay yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah la kulanka himilooyinka xadeynta gobolka. Maalgashiga casriyeynta waxtarka leh ee dhismayaasha dadweynaha waxay la jaanqaadeysaa Guddoomiyaha Gobolka 'Inslee' Waxtarka Gobolka iyo Waxqabadka Deegaanka (SEEP) Amarka Fulinta 20-01 waxayna u taagan tahay habka ugu kharash jaban ee si weyn hoos loogu dhigo qiiqa gaaska lagu sii daayo iyo kharashka ku baxa tamarta ee dowladda iyo gobolka.
Macluumaad ku saabsan tan iyo fursadaha kale ee deeqda Sanduuqa Tamarta Nukliyeerka ah, booqo www.commerce.wa.gov/CEF.
← Ujeeddada Abaalmarinta Kali ah SFY 2022 Barnaamijka U-doodista iyo Ka-hortagga Ka-Hortagga Dhibbanayaasha Galmada OCVA 2021 Duubista Sharci-dejinta →